यो प्रोग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् जुन हामीले निर्माण गरेका छौं हाम्रो प्रोग्रामलाई ठीक गर्नका लागि? | Martech Zone
शुक्रबार, मे 9, 2008 शुक्रबार, मे 9, 2008 Douglas Karr
हाम्रो ग्राहकहरु पीसीएयनी उनीहरुको समर्थन मुद्दा को लागी उपयोग गर्दछ। म भिस्टा चलाउँदै छु - त्यसैले जब मैले हाम्रो इजाजतपत्र प्राप्त ग्राहकलाई लोड गर्ने प्रयास गरें, म द्रुत रूपमा एक असंगति सन्देशसँग भेट भयो र स्थापनाकर्ताले बन्द गरे।
Symantec साइट भ्रमण गर्दा, तिनीहरूले पाठ्यक्रम पक्कै एक संग अनुकूलता मुद्दा फिक्स अपग्रेड गर्नुहोस् संस्करण १२.१ मा। स्न्याग? तपाईंले अपग्रेडको लागि $ १०० तिर्नु पर्छ। मसँग हुनुपर्दछ, त्यसैले मैले १०० डलर तिरे अनुप्रयोगको लागि १०० डलर तिर्नु मात्र काम गर्नका लागि तपाईले प्रारम्भिक इजाजतपत्र भुक्तान गर्नु अघि तपाईलाई रिस उठाउनको लागि पर्याप्त छ।
अब जब म १२.१ लोड भएको छु, मसँग धेरै समस्याहरु छन्। अनुप्रयोग चलिरहेको देखिन्छ यदि मैले टास्क प्रबन्धकमा हेरेँ, तर विन्डो कहिँ भेटिएन। र यदि मैले विन्डो प्राप्त गरें भने यो पूर्ण रूपमा खाली छ। मैले सिमेन्टेक फोरममा मुद्दा खोजी गर्न सुरू गरें। एउटा नोट मैले फेला पारे Symantec अटोफिक्स कार्यक्रम।
कस्तो प्रकारको सफ्टवेयर कम्पनीले एक प्रोग्राम लेख्दछ जुन उनीहरूको मूल कार्यक्रममा असर पार्ने मुद्दाहरूको फिक्स गर्दछ? मलाई लाग्छ Symantec त्यो कम्पनी हुनेछ।
हे सिमेन्टेक: यदि तपाईलाई थाहा छ कि समस्या के हो र यसलाई कसरी सुल्झाउने हो भने यसमा फिक्स राख्नुहोस् तपाईकोमा मूल अनुप्रयोग !!!
स्वत: फिक्स प्रोग्राम स्थापना गरेपछि, PCAnywhere अझै समस्याहरू जारी छ। I क्रिन्ज हुँदा मैले कुनै सिमेन्टेक प्रोग्राम प्रयोग गर्नुपर्दछ... म उनीहरूको बारेमा धेरै लामो समय सम्म लेख्दै छु।
टैग: कार्डआईफोन प्लगइनआईफोन थिमjramersमोबाइल उद्योगआउटडोर विज्ञापनWordPress प्रशासक
मई 10, 2008 मा 8: 59 एएम
Windows Vista... माइक्रोसफ्टको लागि अन्त्यको सुरुवात?
अगस्ट 22, 2008 मा 5: 58 AM
यदि तपाइँ यो लगातार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न प्रयास गर्नुहोस्:
- सुरु गर्नुहोस् sessioncontroller.exe - तपाईंले यो प्रोग्राम स्थापना निर्देशिकामा फेला पार्नुहुनेछ।
- केहि सेकेन्ड पर्खनुहोस्
- त्यसपछि डबल क्लिक गर्नुहोस् र pcAnywhere सुरु गर्नुहोस् (winaw32.exe)
खाली स्क्रिन pcanywhere टाइम आउट भएको कारणले गर्दा sessioncontroller.exe सुरु हुनको लागि पर्खिरहेको छ।
यो 12.5 मा फिक्स गरिएको छ - हाल बिटा मा मा http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
ठिक छ, उत्कृष्ट... बाहेक प्रत्येक .5 अद्यावधिकहरू (र केही .1 अद्यावधिकहरू) छुट्टै उत्पादन लाइन हुन्, जसमा अतिरिक्त खरिद आवश्यक हुन्छ। $ 200 को लागि ($ 100 "अपग्रेड" छुटको साथ पनि), म मेरो सफ्टवेयर उत्पादनले काम गर्ने अपेक्षा गर्छु, बाकस बाहिर, कुनै समस्या बिना। तुरुन्तै।6महिना पर्खिएपछि, वा तिनीहरूको LiveUpdate प्रणालीबाट अद्यावधिकहरूको 30mb प्रतीक्षा पछि पनि… जुन, चाखलाग्दो कुरा, तिनीहरूको स्थापित सफ्टवेयरको एक अंश मात्र देख्छ। एउटै कम्पनीबाट7अलग-अलग उत्पादनहरूका लागि7फरक LiveUpdate उदाहरणहरू आवश्यक हुनुको सट्टा, यसले मेरो Symantec सफ्टवेयरको *सबै* एकै पटकमा किन अपडेट गर्दैन?
मेरो मूल ग्रिपमा फर्कनुहोस्... मैले किन कम्तिमा, १२.१ का प्रयोगकर्ताहरूका लागि जारी गरिएको प्याच भएको हुनुपर्दछ, 12.1 (जसले Vista मा काम गर्दैन) के प्राप्त गर्न थप तिर्नु पर्छ?